के तपाईंले फराकिला पर्दाका लागि सामग्री अप्टिमाइज गर्नु पर्छ? | Martech Zone
के तपाईंले फराकिला पर्दाका लागि सामग्री अप्टिमाइज गर्नु पर्छ?
बुधवार, जनवरी,, २०१२ आइतवार, मार्च १,, २०१। Douglas Karr
म यस पोस्ट मा एक chime मा एक प्रयोगकर्ता अनुभव विशेषज्ञ मन पराउँछु। मैले हेरिरहेको छु कि अधिक र अधिक टेक्नोलोजी साइटहरूले भ्यूपोर्ट (तपाईंको उपकरणको दृश्य क्षेत्र) अधिकतम गर्दैछ र म वास्तवमै त्यसबाट प्रभावित छैन। म विश्वास गर्दिन, यदि तपाईंसँग अधिक रिजोलुसन छ कि तपाईं त्यो रिजोलुसन प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
यहाँ शीर्ष रिजोलुसनहरूको ब्रेकडाउन छ Martech Zone:
सबैभन्दा लोकप्रिय रिजोलुसन, जस्तो कि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, १1366 × 768। हो। यो अहिलेको बजारमा मानक ल्यापटप रिजोलुसन हो। समानुपातिक रूपमा, त्यो पर्दा यस्तो देखिन्छ:
तपाईले देख्न सक्नु हुन्छ कि स्क्रिन धेरै नै धेरै फराकिलो र अलि छोटो छ। जबकि यसले HD स्क्रिन हेर्न अनुकूलित एक उत्तम स्क्रिनको लागि बनाउँछ, यो वास्तवमै वेबसाइट र पढ्नका लागि अनुकूलित स्क्रिन होइन। र हामी दुरीमा भिडियोहरू हेर्छौं ... नजिकै होइन जहाँ हामी पाठ पढिरहेका छौं र कीबोर्डमा टाइप गर्दैछौं। ठाडो पर्दा यसको लागि अझ राम्रो रिजोलुसन हुनेछ, किनकि वेबसाइटहरू चौडाईमा भन्दा उनीहरूको लम्बाइ फरक हुन्छ।
त्यसोभए, म वेबसाईटहरूको यस हमला देख्दै छु जुन भ्यूपोर्ट अधिकतम बनाउन डिजाइन गरिएको हो र म बिक्री भएको छैन। समाचार पत्रहरूले धेरै समय अघि भेट्टायो कि मानिसहरूले ठाडो पट्टिहरू पढ्दछन्, लामो तेर्सोमा होइन। हाम्रो फोकस हराउन को लागी झल्छ हामी स्क्रिन भर को लागी। एलिमेन्टहरू टाढा बायाँ, वा दायाँ सार्दा ध्यान केन्द्रित गर्न बाध्य पार्दछ किनकि म सामग्री पढ्दै छु, त्यसैले दुबै तत्वहरू जस्तै साइडबारलाई पूरै बेवास्ता गरिन्छ।
कि संग, म पुनः डिजाइन गर्न खोजिरहेको छैन Martech Zone कुनै समय चाँडै त्यो तेर्सो रियल इस्टेट लिन स्क्रिन। मनिटरमा हाम्रो डिजाइन एक मोबाइल उपकरण वा ट्याब्लेटमा अनुभव भन्दा फरक छ र हामी ती अनुभवहरूलाई अनौंठो राख्नेछौं। ब्लगमा हाम्रो चौडाइ शीर्ष देखि तल पढ्न र साइड कुञ्जी हेर्दा हामी कुञ्जी सामग्री हेर्ने क्रममा उत्कृष्ट छ। हाम्रो प्राथमिक सामग्री मानक भिडियो आकारहरू समायोजन गर्न 640०px फराकिलो छ र स्टर्डबार जुन advertising००px चौडा मानक विज्ञापनको लागि छ।
तिम्रो के बिचार छ? के हामी अन्य साइटहरूको मार्गमा जान्छौं? वा म हाम्रो वर्तमान लेआउटको साथ सहि ट्र्याकमा छु?
टैग: 1024x7681366x768डिजाइनhd मनिटरठूलो मोनिटरमनिटररिजोलुसनहरू निगरानी गर्नुहोस्आकार मोनिटरसंकल्पटेकभ्यूपोर्टफराकिलो मोनिटर
किन मोबाइल अनुप्रयोगहरू फरक छन्
जनवरी १, २०१ 31 १२::2013 अपराह्न
म भन्न सक्दिन कि म प्रयोगकर्ता अनुभव विज्ञ हुँ, तथापि म लामो समयदेखि साइटहरू निर्माण गर्दैछु, र कम्तिमा उत्तरदायी डिजाइनको लागि सबैलाई कडा मद्दत गर्दैछु, यदि मात्र तपाई समस्याहरूको ख्याल राख्ने हो भने। सामना गर्दै
यदि तपाईं म्यासिएबल, द भर्ज, र एनपीआर जस्ता साइटहरूमा एक नजर राख्नुहुन्छ भने, तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरूले धेरै व्यापक डिजाईनमा बदलेको छ जुन तपाईंले भन्नुभएको थियो जुन म व्यक्तिगत रूपमा माया गर्छु, किनकि म काम गर्दछु र मेरो धेरै काम सम्बन्धित सामग्री पढ्छु। एक 32 ″ स्क्रीन।
जे होस्, मेरो विचारमा जब यो तपाइँको जस्तो साइटहरूको बारेमा आउँदछ, मैले सोच्नुपर्दछ के बलिदान गरिन्छ र कस्तो प्रकारको बजेटमा तपाईलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।
ममा विकासकर्ताले विशेष सामग्रीमा केही फराकिलो डिजाइनहरूको साथ परीक्षणको सिफारिस गर्दछ, र विशिष्ट भ्यपोर्टहरूको लागि एक रिडाइरेक्ट प्रयोग गरेर, त्यहाँबाट जानुहोस्।
मैले फेला पारे कि द वर्ज र म्यासिएबल जस्ता साइटहरूसँग, वास्तवमै उत्कृष्ट टुक्राहरूलाई राम्रो कोठाको आवश्यक पर्दछ, र फराकिलो डिजाइनले वास्तवमै त्यससँग मद्दत गर्दछ।
यस महान अन्तरदृष्टि को लागी धन्यवाद, डग! हामी अवश्य पनि लगानी गर्छौं यदि त्यहाँ प्रमाण छ कि विस्तृत, उत्तरदायी ढाँचाहरू पढ्न योग्यता र साइटमा संलग्नता सुधार गर्दै छन्। के त्यहाँ यसको पक्का प्रमाण छ?